Aynu ka hadalno Geysers | Saadaasha Shabakadda
Waa a gu ’kulul oo si joogto ah u erya biyaha karkaraya iyo uumiga. Wuxuu sameeyaa xilliyo, qaab tiir ah, waana wax soo jiidasho leh oo qurux badan in la arko haddii aan waligeed horay loo arag. Magaceeda, Geyser, wuxuu ka yimid Geysir, Iceland. Sababtoo ah mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee ay leedahay waxaa loogu yeeraa sidaas, aakhirkiina magaceeda ayaa loo qaatay in loogu magac daro ilaha noocan ah magac guud.
Iceland waa gobol aad ugu nugul helitaanka Geysers. Xaqiiqdii, waa mid ka mid ah meelaha meeraha meeraha "ifafaalooyinka" gaarka ahi ka jiraan, marka la eego meesha ay ku taallo. Sababtaas awgeed, Geysers waxay u baahan yihiin inay jiraan hydrogeology wanaagsan oo laga helo meelo yar oo meeraha ah. Kun meeraa jira badhkoodna waxay ku yaalliin jardiinada qaran ee Yellowstone, ee Mareykanka.
Waxaa jira laba nooc. Mid waa nooca koorta. Nooca kale ee jira waa font. Labaduba way ceyriyaan biyaha, iyagoo raacaya qaab isku mid ah. Haddii maalin uun aan isku aragno Geyser hortiisa, oo aan dooneyno inaan iska ilaalino xilliga cayrinta, waa in la yiraahdaa waxay ku dhacdaa afar waji. Midka hore waa uumiga oo ka soo baxa biyaha kulul. Midda labaad ayaa ah in biyuhu bilaabaan inay qarqiyaan. Markaa xiisadda dusha sare, ee ay sababtay biyaha qaboojiyey, ayaa jaban. Ugu dambayntiina waxay ceyrisaa dhammaan biyahaas.
Si loo fahmo sida ay u jiri karaan, waxaan helnaa sababta ugu horeysa ee biyaha. Biyaha dusha sare waxaa lagu sifeeyaa dhulka waxayna ku urursan yihiin godadka gudaha. Ahaanshaha mid aad u hooseeya, iyo sida caadiga ah meelaha qolofku ka khafiifsan yahay, heer kulka ayaa sarreeya. Magma ayaa mas'uul ka ah kor u qaadista heerkulka, taas oo ka dhigaysa biyaha kuleylka inay uumi baxaan. Taasi waa waxa sababa cadaadiska inuu kordho, waxaanan leenahay wejiyada cayrinta, ee ku xusan tuduca hore.
Waqtiga udhaxeeya qarxa biyuhu wuxuu aad ugu kala geddisan yahay hal jawi geeri kale. Mid ka mid ah kuwa ugu firfircoon waxaa laga helaa Iceland, Strokkur, oo ceyrintiisa joogtada ah ee ilbiriqsiyadii ugu dambeeyay ay dhacaan 14kii daqiiqaba. Dhinaca kale, waxaa jira kuwa kale sida Grand Geyser ee Mareykanka oo biyaha ka ceyrinaya illaa 10 daqiiqo, 8-dii ilaa 12-kii saacadoodba. Ma jiro qaab sax ah.
Ma seegi kartid yaabkan dabiiciga ah ee umuuqda in laga soo qaatay sheekada Alice ee Wonderland. Sawirka la mahadiyey waa mid dhab ah, ma leh dib-u-habeyn, ama barnaamijyo, ama wax kale. Waxay u jirtaa sidan oo kale, maadaama la qadariyo, waxaana laga helaa Mareykanka. Goobtu waxay ku taal aag lamadegaan ah oo la yiraahdo Gerlach oo ku taal Nevada. Waxay leedahay mid keliya laakiin, ma aha mid si guud loo heli karo. Sababtoo ah waxay ku dhex taal si sax ah gudaha xoolo gaar ah, oo loo yaqaan Fly Ranch. Shar iyo xumaanba.
Sababta uu Geyserkaan u jiri karaa waxay soo jirtay sanadkii 1916-kii. Waqtigaas, koox rag ah waxay doonayeen inay dhulka qotaan iyagoo raadinaya biyo dalag iyo xayawaan. Waana sida ay ku heleen, laakiin 200ºC. Nimanku markay arkeen qaladkooda waxay doonayeen inay qariyaan. Ugu dambeyntiina, sannado ka dib, 1960kii, Geysku si dabiici ah ayuu u soo ifbaxay, isaga oo eryaya biyaheeda karkaraya.
Daqiiqad ay biyaha ka saareyso
Kaalsiyamka kaarboonatka dhulka ku jira ayaa abuuray midabada cajiibka ah, cayrintooda. Cagaar, casaan, jaalle ah, kana dhigaysa meel sixir ah lamadegaanka dhexdiisa. Haddii ay dhacdo in maalin uun qof ka ag dhowaado, oo uusan soo geli karin meesha, xoogaa muraayadaha indhaha ah. Maxaa yeelay inkasta oo marinku xaddidan yahay, haddana waxaa laga arki karaa waddada weyn ee dhex marta Gobolka Washoe.
Waa in la ogaadaa in agagaarka Fly Geyser, ay sidoo kale jiraan kala duwanaansho noole, oo leh dhir badan, harooyin iyo boqolaal shimbirood. Runtii oasis oo lamadegaanka dhexdiisa ah. Qurux qarinaya meeraheenna aan jecel nahay, oo aanan ilaawi karin maqaalkeenna loogu talagalay Geysers-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Aynu ka hadalno geysers